Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato ku saabsan xayeysiisyada Reels Instagram | BehMaster
Bogga ugu weyn/Warbaahinta bulshada/Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato ku saabsan xayeysiisyada Reels Instagram
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato ku saabsan xayeysiisyada Reels Instagram
Sida caanka ah ee Instagram Reels ay u sii kordheyso, sidoo kale awoodeeda suuqgeyn iyo qalab xayeysiis ah ayaa sii kordheysa. Taageerayaasha qaabka TikTok ay dhiirigelisay ayaa ku farxi doona inay ogaadaan in xayeysiisyada 'Instagram Reels' ay hadda diyaar ku yihiin goobta.
Instgram-ku waxa uu bilaabay Reels caalami ahaan sanadka 2020. Waa 15 ilaa 30-ilbiriqsi, muuqaalo goos goos ah oo badan oo laga daawado tabka Reels ee profile Instagram iyo gudaha Sahaminta. Waa foom xog ka kooban oo si heersare ah u soo jiidanaya kaasoo ka dhigi kara ganacsigaaga taageerayaal badan.
Instgram ayaa dhawaan bilaabay xayeysiisyada 'Instagram Reels', taasoo la micno ah in ganacsigaagu hadda u isticmaali karo qaabkan qaab cusub oo cusub si uu u gaadho daawadayaasha la beegsaday.
Halkan, waxaan ku sharxi doonaa:
Waa maxay xayeysiisyada Instagram Reels
Sida loo sameeyo xayeysiisyada Instagram Reels
Sida loogu isticmaalo Reels Instagram-ka xayeysiinta
Bonus: Download ah free 10-Maalin Reels Challenge, Buug-hawleed maalinle ah oo dhiirigelin hal abuur leh oo kaa caawin doona inaad ku bilowdo Instagram Reels, la socoshada koritaankaaga, oo arag natiijooyinka guud ahaan astaantaada Instagram.
Waa maxay xayeysiisyada 'Instagram Reels'?
Xayeysiisyada 'Instagram Reels' waa meeleyn cusub oo loogu talagalay xayeysiisyada goobta. Isku soo wada duuboo, adeegsiga xayeysiisyada 'Instagram Reels' ayaa wali ah hab kale oo ganacsiyada ay ku xayaysiinayaan goobtan. (Oo waxaa jira wax badan - fiiri.)
Foomka xayaysiinta ayaa si caalami ah loo bilaabay bartamihii Juun 2021 ka dib markii lagu tijaabiyay dhowr wadan oo la doortay, oo ay ku jiraan Brazil iyo Australia.
Sida laga soo xigtay Instagram, "Reels waa meesha ugu fiican ee Instagram si ay u gaaraan dadka aan ku raacin iyo marxalad caalami ah oo sii kordheysa halkaas oo summadaha iyo hal-abuurayaasha laga heli karo qof kasta. Xayeysiisyadani waxay ka caawin doonaan ganacsiyada inay gaaraan dhegaystayaal badan, taasoo u oggolaanaysa dadka inay ogaadaan waxyaabo dhiirigelinaya oo ka imanaya summadaha iyo abuurayaasha."
Xayeysiisyada Instagram Reels waxay aad ugu eg yihiin xayeysiisyada Sheekooyinka Instagram. Waa muuqaalo shaash buuxa ah, oo toosan, sida kan Instagram Reels tusaale xayaysiiska Superstore, silsilad dukaaneedka Kanada:
Iyo sida xayaysiisyada Sheekooyinka Instagram, Xayeysiiska Reels ee Instagram wuxuu ka dhex muuqdaa Reels caadiga ah, ee aan la kafaala qaadin ee isticmaalayaashu ay daawanayaan.
Sidoo kale ogow in Instagram Reels xayeysiisyada:
U oggolow isticmaalayaasha inay faallo ka bixiyaan, wadaagaan, kaydiyaan oo ay jecel yihiin
Sida xayaysiisyada oo dhan, xayeysiisyada Reels ayaa ka muuqda Instagram-ka oo loo calaamadeeyay in la kafaala qaaday.
Xagee lagu soo bandhigi doonaa xayeysiiskayga Instagram Reels?
Waxaa jira dhowr siyaabood oo kala duwan isticmaalayaasha Instagram loogu adeegi karo xayeysiisyada Reels, oo ay ku jiraan:
Gudaha Reels tab, oo laga heli karo shaashadda guriga
In ay quudin
Xayeysiisyada 'Instagram Reels' waxaa lagu soo bandhigaa isla qaybaha abka halkaas oo isticmaalayaashu ay ka helaan waxyaabaha ku jira Reels organic. Tani waxay fursad weyn u tahay summadaha si ay kor ugu qaadaan ciyaartooda, u helaan hal-abuur iyo si aan kala go 'lahayn u soo jiitaan dareenka dhegaystayaashooda marka ay dhex wareegayaan waxyaabaha la midka ah.
Sida loo sameeyo xayeysiisyada Reels Instagram
Hadda oo aad ogtahay waxa uu yahay qaabkan cusub ee xayeysiiska, talaabada xigta waa barashada sida loo sameeyo xayeysiiska Instagram Reels. Haddii aad horay uga shaqeysay Maareeyaha Xayeysiiska Instagram, nidaamku waa neecaw.
Tallaabada 1: Samee xayeysiiska
Ka bilow inaad hal-abuurada isku dhejiso. Tani waxay ka dhigan tahay duubista fiidyahaaga iyo inaad hubiso inuu yahay cabbirka saxda ah. Inta lagu jiro marxaladan, waa inaad sidoo kale qortaa nuqulkaaga iyo qoraalladaada, oo aad go'aansato hashtagyada.
Hal-abuur samee! Reels-ka Dabiiciga ah waxaa badanaa lagu lammaaniyaa muusig ama cajalado dhawaaqa fayraska ah. Waxay yihiin mararka qaarkood (ama inta badan) qosol ama qosol leh. Haddii ay ku habboon tahay summadaada, hel qayb cajalad maqal ah oo caan ah oo la shaqeysa xayeysiiska si ay ugu habboonaato kuwa kale, isticmaaleyaasha Reels ee aan la kafaala qaadin ayaa daawanaya.
Tallaabada 2: U gudub Maareeyaha Xayeysiiska
Hubi in shirkaddaadu leedahay akoon ganacsi oo Instagram ah. Taasi waxay hubinaysaa inaad marin u yeelan doonto Maareeyaha Xayeysiiska. (Haddii aadan aqoon, waa kan sida loogu xidho ganacsigaaga akoontada Instagram-ka iyo maamulaha xayaysiisyada.)
Talaabada 3: Dooro yoolkaaga xayaysiis
Waa maxay ujeeddada meheraddaadu ee ah inaad xayeysiis ugu dhejiso Instagram Reels? Waxaa jira dhawr ikhtiyaar oo diyaar ah, laakiin iska hubi inaad doorato ujeedo gaar ah Reels:
Source: Facebook ee Ganacsiga
Lix ujeedo oo xayeysiis ah ayaa diyaar u ah meelaynta xayeysiinta Reels:
Tallaabada 4: Buuxi dhammaan faahfaahinta ololaha xayaysiiska
Taas waxaa ku jira tafaasiisha xayaysiisyada muhiimka ah sida miisaaniyadaada, jadwalka iyo dhagaystayaasha bartilmaameedka ah.
Tallaabada 5: Dhig xayeysiiska
Dooro Meelaynta gacanta Kadib, u gudub hoos u dhaca ku xiga Sheekooyinka. Dooro Reels Instagram si ay xayaysiisku ugu soo muuqdo xayaysiis Reels Instagram.
Talaabada 6: Habee wacitaankaaga ficil
Adiga ayaa go'aan ka gaaraya sidii aad ugu dhiirigelin lahayd daawadayaasha inay ficil sameeyaan. Tusaale ahaan, waxaad ku habeyn kartaa CTA ee badhanka adigoo isticmaalaya:
Waana taas! Xayeysiiskaaga Instagram Reels waa diyaar. Kadib marka dib loo eego oo la ansixiyo, xayeysiisku wuxuu u soo bixi doonaa si guud
Instagram Reels xayeysiisyada ugu dhaqsaha badan
Ma doonaysaa inaad ogaato sida aad uga faa'iidaysan lahayd xayaysiimahaaga Instagram Reels? Maskaxda ku hay talooyinkan sare si aad u abuurto xayeysiis wax ku ool ah oo soo jiidasho leh. Xusuusnow: Xayeysiiska Reels-ka weyn wuxuu la mid yahay Reel kasta oo kale oo weyn!
Talo #1: Waqti Reel-ka
Si kale haddii loo dhigo, hubi inaad u qortay Reel-ka inuu ku habboon yahay xadka 30ka ilbiriqsi si aanu u go'i doonin!
Xayeysiisyada Instagram Reels, sida Instagram Reels ee caadiga ah, waxay dhererkoodu u dhexeeyaan 15 iyo 30 ilbiriqsi. Haddii aad samaysay muuqaal aad u dheer, waxaad halis u tahay inaad lumiso la wadaagida fariinta ugu muhiimsan ganacsigaaga dhageystayaasha mustaqbalka.
Talo #2: Ogow waxa dhagaystayaashaadu u arkaan inay soo jiidanayaan
Ha samayn mala awaal! Hadda oo Instagram Reels Insights waa shay, uma baahnid inaad.
Fikradaha Instagram Reels waa cabbirro ku tusinaya sida Reels-kaagu u qabtay xagga gaadhista iyo ka-qaybgalka.
Raad raac tirooyinkan si aad u aragto qaabka Reel ee taageerayaashaada hadda ku hawlan yihiin inta badan. Kadib, ku dayo qaabkaas marka aad abuurayso xayeysiisyada Reels ee Instagram.
Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa in falanqaynta Reels ay muujiso in dhagaystayaashu ay si hamuun leh ula macaamilayaan sida loo Reels, iyo in qaab la mid ah uu kaa caawiyo inaad gaarto dadka ugu badan. Samaynta sida-instagram Reels xayaysiisku waxay noqon kartaa hab fiican oo lagu qanci karo dhagaystayaasha aad beegsanayso, oo ku dhiirigeli daawadayaasha inay taabtaan badhanka CTA ee xayeysiiskaaga.
Talo #3: Ku dar maqal iyo qoraal
Haa, maqalku aad buu muhiim u yahay - gaar ahaan Reels. Ku darista codka saxda ah ee xayeysiisyada Reels waxay ka caawin doontaa inay ku milmaan nuxurka Instagram-ka ee dabiiciga ah.
Marka la dhaho, noqo mid loo dhan yahay. Qaar ka mid ah daawadayaashaada bartilmaameedka ah ayaa laga yaabaa inay rog-rogaan abka iyadoo codku dansan yahay, qaarna waxaa laga yaabaa inay leeyihiin cillad maqal.
Ku daridda qoraallada Reels-kaaga (Xayeysiisyada Reel waxaa ku jira) waa hab wanaagsan oo lagu hubinayo in qof kastaa awood u yeelan doono inuu fahmo, ku raaxaysto oo la falgalo macluumaadkaaga.
Talo # 4: Si sax ah u cabbir cabbirkaaga
Qofna ma samayn doono xayeysiis aan qarsoonayn. Hubi in sawirka aad ku isticmaalayso Reel-kaagu uu yahay saamiga ugu habboon ee saamiga iyo cabbirka xayeysiisyada Instagram ee shaashadda buuxda ah.
Saamiga dhinaca Reels waa 9:16 cabbirka faylka ugu habboona waa 1080 pixels 1920 pixels. Soo rarista faylalka aan ku habboonayn biilka waxay keeni kartaa xayaysiisyada Reels-ka oo aan fiicnayn ama si xun u go'ay oo u ekaan doona caajis iyo xirfad-darro.
Talo #5: Geli ruuxa Reel-ka
Xayeysiiska Reels iyo Reels waa hab fiican oo lagu tuso sida xiisaha, hal-abuurka, fikirka iyo xitaa qarsoodiga ah ee astaantaadu u tahay. Marka, ilaa inta ujeeddada xayeysiiskaaga Reels ay tahay in la abuuro taraafikada, aragtida ama dhagsiyada, iska hubi inaad ka dhigto mid madadaalo leh. Haddii macluumaadkaagu aad u riixayo oo la iibinayo, dhagaystayaashaadu waxay u badan tahay inay u boodboodaan Reel-ga xiga iyaga oo aan la falgelin.
Qoraal uu wadaagay Louis Vuitton (@louisvuitton)
Instagram Reels tusaalooyinka xayaysiisyada
Waa kuwan qaar ka mid ah tusaalooyinka waaweyn ee xayeysiisyada Reels ee noocyada waaweyn kuwaas oo kaa caawin doona inaad dhiirigeliso oo aad bilowdo ololahaaga ugu horreeya adiga oo isticmaalaya meelayntan.
Adeegga qulqulka wuxuu isticmaalaa Reels si uu kor ugu qaado bandhigyada Netflix-gaar ah ee cusub.
Qoraal uu wadaagay Netflix US (@netflix)
Nespresso waxay isticmaashaa Reels si ay u muujiso sida ay uga go'an tahay waaritaanka iyo kor u qaadida taxanaha IGTV ee soo socda.
Qoraal uu wadaagay Nespresso (@nespresso)
Astaanta baabuurta raaxada waxay isticmaashaa Reels si ay kor ugu qaaddo moodel baabuur oo cusub.
Qoraal uu wadaagay BMW (@bmw)
Iyada oo ay jiraan xoogaa dhiirigelin ah oo ku hoos jira suunkaaga iyo aqoonta ku saabsan sida loo bilaabo, ganacsigaagu wuxuu diyaar u yahay inuu isticmaalo xayeysiisyada Instagram Reels si aad u gaadho dhagaystayaasha bartilmaameedka u ah, kordhiso wacyiga summada oo aad u kordhiso gaadhistaada goobta.
15 Makhaayadaha Bilaashka ah ee ugu Fiican WordPress Plugins ee 2021
Sida loo isticmaalo astaanta Huddles-ka cusub ee Slack ee iPhone, iPad iyo Mac